အခမဲ့ join| ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း | My Weboffice
နေအိမ် > အမျိုးအစားအားလုံး > Fabric > ပန်းစက်ရုံလက်ကားထည်ဝါအထည်ချုပ်ဇာ
ကျွန်ုပ်၏အနှစ်သက်ဆုံးများကို ADD ရန်
ကိုးကားစရာ FOB စျေး နောက်ဆုံးရစျေးကိုရယူပါ
≥ 500 ခြံ (များ)
ဆိပ်ကမ်း: SHANGHAI , NINGBO
ငွေပေးချေမှုရမည့်: L/C D/P
မော်ဒယ် number 18006 Keyword ပန်းထိုး, အဝတ်
ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတစ်စု 20219 ပစ္စည်း 100% polyester
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် នៅ​ក្នុង​ស្តុក လက်မှုပညာ ត្បាញ
Width 47/48" အလေးချိန် 208GSM
ပုံစံ ថ្នាំជ្រលក់ធម្មតា စတိုင် ផ្សេងទៀត
အသုံး សំលៀកបំពាក់,សំលៀកបំពាក់,ឆ័ត្រ,ខោអាវក အမှတ်တံဆိပ် CARINA
A1: ၁၃ နှစ်ကြာ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ထူးခြားသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များရှိသည်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးအာမခံချက်, ပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
Customer'satisfaction အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ မဆိုအရွယ်အစား, ပစ္စည်းများ, အရောင်, ဒီဇိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်,
A2: သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်မှသင် ၀ ယ်ယူသောအခါသင်၏ပုံမှန်လိပ်စာသို့ ရက်သတ္တပတ် ၁-၂ ပတ်ခန့်ကြာမြင့် မည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလသည်သင်ကုန်သည်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုသင်ရွေးချယ်သည်။
သင်နမူနာပေးသလား။ အခမဲ့လား၊ ကုန်တင်လား။
A3: ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်ဖို့နမူနာတွေပေးမယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏နမူနာကိုလက်ခံနိုင်လျှင်။ ဒါကအခမဲ့နမူနာတစ်ခုပါ၊ သင်ပို့ဆောင်ခပေးရပါမည်။
သို့သော်၊ စစ်ဆေးမှုပြုပြီးသောအခါသင်အသုံးပြုမည့်အတိုင်းကိုက်အချို့ကိုအရင်ဝယ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုသေးငယ်တဲ့နမူနာပေးပို့နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်ကသူတို့ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
A4: ယေဘူယျအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မည်။ ကြိုတင်မှာယူမှုကို 30% T / T ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ တင်ပို့မှုမတိုင်မှီ ၇၀% T / T ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
A5: ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊
6.Product ပြaနာတစ်ခုရှိပါတယ်, ပြီးနောက် - ရောင်းပြီးနောက်လျှောက်ထားရန်?
A6: ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းမပြုမီကုန်ပစ္စည်းများစံသတ်မှတ်ချက်ရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိလျှင်ကုမ္ပဏီ၏စံနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပြcustomersနာကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပေးပို့ပါ။ ငါတို့ရန်။ စနစ်ကိုစစ်ဆေးပါမည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိပါကဆုံးရှုံးမှုအတွက်သင့်အားလျော်ကြေးပေးမည်ဖြစ်ပြီးစာပို့ခသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာသာဖြစ်သည်။
ဒီ website တွင်ဝယ်လက်နှင့်ရောင်းချသူများကထောက်ပံ့ပေးအကြောင်းအရာအာမခံနှင့် GlobalTextiles.Com အသုံးပြုပုံစစ်မှန်တိကျမှုနှင့်ခိုင်လုံသောဖြစ်စိတ်ချပါနှင့် GlobalTextiles.Com သို့ဖြစ်. ဆင်းသက်လာမည်သည့်အမှားသို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကျင်းမရနိုင်ပါ။ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကား ကိုအားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသတင်းအချက်အလက် Translate Google ထံမှဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ Globaltextiles.com နှင့်၎င်း၏ affiliates, ဆောင်ရွက်ရန်အမြန်သို့မဟုတ် ဆက်စပ်. အများနှင့်မဆိုအရှုံး, အလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာပြန်ချက်အမှားများကိုများအတွက်ထိုက်မဟုတ်ကြဘူး။
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Wong Carina
US$5.9 / ခြံ (များ)
များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပန်းစက်ရုံလက်ကားထည်ဝါအထည်ချုပ်ဇာ
ငါမှသဘောတူ Globaltextiles.com န်ဆောင်မှုများ၏စည်းမျဉ်းများ